Af-Sawaaxili - Wikipedia
Af Sawaaxili, loogu dhawaaqo Kiswahili, waa Luqad Bantu ah, waxayna luqada koowaad u tahay Dadka sawaaxiliga. Waa lingua frankiga Bariga Afrika iyo Koonfurta hoose ee Afrika, oo ay ka midtahay Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, meelo ka mid ah Malawi, Soomaaliya, Zambia, Mozambique iyo Jamhuuriyada Dimuqaraadiga Kongo (DRC).
Tansaaniya, Jamhuuriyada Dimuqaraadiga Kongo, Kiinya, Musanbiig, Burundi, Ruwanda, Yugandha, Komoros, Mayotte iyo qeybo ka mid ah Saambiya, Malaawi, Madagaskar iyo Koofurta Suudaan
tirada dadka ku hadla = 15 000 000 - 25 000 000
in ka badan 150 milyan oo ku hadla
Template:Jamhuuriyada Dimuqaraadiga Kongo
Template:Country data Zanzibar
Template:Country data East African Community
and trade language. As a trade language, Swahili extends some distance further to the northwest.[xigasho u-baahan]
Tirada saxda ah ee kuwa ku hadla Sawaaxiliga lama yaqaan. Qiyaaso kaladuwan ayaa horey loosoo bandhigay oo udhaxaysa 100 milyan ilaa 150 milyan oo qof.
Af sawaaxiliga waxay luqad qaran u tahay DRC, Kenya, Tanzania, iyo Uganda, sidoo kale waa mid ka mid ah luqadaha ka shaqeeya Ururka Midowga Afrika, waxaana si rasmi ah loogu aqoonsaday inay tahay lingua frankiga Bulshada Bariga Afrika.
Waxaa la rumeysan yahay in Sawaaxiliga lagu hadlo ilaa ugu yaraan qarnigii tobnaad. Waxay noqotay af qoran qarnigii 16aad. Boqolkiiba 20 ka mid ah ereyada Sawaaxiliga ayaa asal ahaan ka soo jeeda Carabi, halka inta soo hadhayna ay yihiin asal Afrikaan ah. Johann Krapf wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee isticmaala farta Roomaanka halkii uu ka isticmaali lahaa far Carabi caadadii ahayd qorida Sawaaxiliga (1847). 1847kii Johann Krapf waxa uu bilaabay in uu Kitaabka quduska ah u tarjumo Sawaaxili. Tani waxay sidoo kale keentay in "Yehova" (Yehowah) ay noqoto tarjumaadda ugu badan ee magaca Ilaah ee Swahili.
Erayo sawaaxili ahEdit
Digniin: Qaybtan wax tixraac ah kuma jiraan.
jambo hallo (hayeh ama salaamu caleykum
hujambo? – sijambo (Sideetahay - waa fiicanahay!
hamjambo? – hatujambo (Sideetihiin? - waa fiicannahay!
hajambo? – hajambo (sidooyahay ama ee tahay? - woo fiicanyahay ama wee fiicantahay!
habari? – nzuri! (maxaa cusub? wax cusub!
kiboko (jeer *weewee(adiga
karibu (Soo dhawoow!
kwaheri (jaaw ama waa baxay!
asante sana (aad aa u mahadsantahay!
hakuna matata (dhibaato malahan!
ninakupenda (waa ku jeclahay!
haraka haraka (boobsii/dhakhsi
samahani (iska raali ohoow
mzungu (cadaan (naag ama nin)
hamna (mataalo ...
shikamo (salaan, qof kaa ween
mambo (iska warran
poa (iska caadi
dada (walaashaa kaa weyn
kaka (walaalkaa kaa weyn
kesho (bari subax
pumba (kala saarin, bariis
lala salama (soo bari/habeen wanaagsan
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Sawaaxili.
↑ Mazrui, Ali Al'Amin. Swahili state and society: the political economy of an African language, 1995, East African Educational Publishers
↑ HOME – Home, Swahililanguage.stanford.edu: After Arabic, Sawaaxiliga waa luqad afrikaan tan ugu wayn laakiin tirada dadka ku hadla ayaa ah aag kale oo ay ka jirto heshiis yar.. Lambarada ugu badan ee lasheegay ayaa ah 50, 80, iyo 100 miliyan oo qof. [... Tirada dadka u dhashay luqada ayaa ah wax ka yar 20 million.]
↑ Development and Promotion of Extractive Industries and Mineral Value Addition, East African Community
↑ God’s Name Made Known In Swahili
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Af-Sawaaxili&oldid=236088"
Last edited on 1 Juun 2022, at 05:44
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Juun 2022, marka ee eheed 05:44.